⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️[BTS ikufuphi] Uyilo olutsha loyilo Condo🏝@Bearing - I-Airbnb
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️[BTS ikufuphi] Uyilo olutsha loyilo Condo🏝@Bearing
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguMatt
Le yindlu yokulala entsha e-1 ene:
-Ibhedi etofotofo - Dunlopillo (UK)
-i-wifi enesantya esiphezulu
-izinto ezintle zasekhaya
-Izixhobo ezimangalisayo (iindawo zokuqubha ezi-2 ezintle kunye negumbi lokuzivocavoca)
-Iindawo eziluncedo zokuhlala (imarike yokutya yasekhaya, ivenkile efanelekileyo kunye neendawo zokutyela)
- icociwe kwaye ivalwe inzala ngeDettol
Ibekwe kufutshane neSitishi se-Bearing BTS (imizuzu emi-6 uhamba nge-500m umgama) kunye nokutya okwahlukeneyo kwasekhaya kufutshane. Indawo yethu yokuhlala yeyona ndawo ifanelekileyo kubakhenkethi kunye neengcali zoshishino.
Le yindlu enegumbi elinye elitofo-tofo elihlala ngokukhululekileyo iindwendwe ezimbini. Igumbi lokulala libandakanya ibhedi enye yokumkanikazi. Igumbi liyisayizi egqibeleleyo yesibini okanye isethi yabahlobo abasondeleyo. Igumbi lifakwe ngokupheleleyo kwaye lixhotyiswe ngeelinen ezongezelelweyo kunye neebhedi zokuthuthuzela iindwendwe zethu.
Iindwendwe zinokonwabela ukukhanya kwendalo okuhle ukusuka kwifestile enkulu kwindawo yokulala. Ungakhathazeki, ukuba ukhetha ukugcina ilanga ngaphandle kwegumbi lakho, sixhobise ifestile ngamakhethini amnyama. Sikhuthaza iindwendwe zethu ukuba zikhululeke kwaye zisebenzise ii-hangers ezithandekayo ukuxhoma iimpahla zabo.
Yonwabela amava acwebezelayo efulethini elicocekileyo. Njengawo onke amanye amagumbi kwigumbi lokuhlambela, igumbi lokuhlambela licociwe ngokobuchwephesha kwaye ligcinwe ukulungiselela iindwendwe zethu. Akukho sidingo sokuhamba ngeetawuli okanye izinto ezisisiseko zokuhlambela, sigcine igumbi lokuhlambela ngayo yonke into oza kuyidinga. Iindwendwe zingafumana isepha, ishampu, isilungisi, iphepha langasese, kunye nesomisi seenwele kwigumbi lokuhlambela.
Izixhobo zokuhlambela zintsha kraca kwaye zangoku. Isifudumezi samanzi kunye nentloko yeshawari ekhutshwayo ziyafumaneka kwindawo yokuhlambela. Siyaziqinisekisa iindwendwe zethu ngamava acocekileyo nakhululekileyo kwigumbi lokuhlambela.
Njengamanye amagumbi kwikhaya lethu, ikhitshi elivulekileyo lixhotyiswe ngezinto ezilula ukulungiselela iindwendwe zethu.
Iindwendwe kufuneka zizive zikhululekile ukusebenzisa izitya kunye nesilivere enikezelwe ekhitshini. Iindwendwe zinokuziva zikhululekile ukusebenzisa iimbiza kunye neepani ekuphekeni izidlo ezincinci. Ikhitshi likwabandakanya iketile yombane yeti kunye nekofu, kunye nesitshisi esi-2 sokupheka.
Igumbi lokuhlala / indawo eqhelekileyo
Buyela emva kwaye ukhululeke kwigumbi lethu lokuhlala kunye nendawo eqhelekileyo yendawo. Igumbi lokuhlala, njengawo onke amanye amagumbi asekhaya, lixhotyiswe ngokupheleleyo kwaye lihonjiselwe ukuziva ngathi likhaya.
Iindwendwe zingangqengqa esofeni kwaye zonwabele iTV yescreen esisicaba, ehambelana nazo zonke izixhobo.
Igumbi lokuhlala lizaliswe kukukhanya kwendalo ukusuka kwindawo entle ye-balcony kwaye ihonjiswe ngokundilisekileyo ngokuziva okuncinci okuncinci.
Iindwendwe zinokufumana intuthuzelo epheleleyo kwigumbi lethu. I-condo ixhotyiswe ngezinto ezifanelekileyo zokuqinisekisa ukuhlala kamnandi ngokumangalisayo.
Iindwendwe zethu zonwabela i-wifi ekhawulezayo eqhubekayo kulo lonke igumbi. I-wifi ithembekile kwaye ifanelekile kubahambi bezoshishino. Kukwakho nendawo etofotofo kunye nezitulo ezifumanekayo kwindawo yokusebenzela efanelekileyo yelaptop.
Igumbi likwabandakanya indawo yomlilo yangaphakathi kunye nokufudumeza okwakhelwe ngaphakathi, ekusenokwenzeka ukuba awuyi kufuna eBangkok, kodwa ukuba uyayenza, ikhona. Iindwendwe zethu kunokwenzeka ukuba zisebenzise i-airconditiong ekhoyo kulo lonke igumbi.
Sikhuthaza iindwendwe zethu ukuba zisebenzise umatshini wokuhlamba kunye nezinto zokuhlamba ezikhoyo ekhaya. Sifake ne-ayina kunye nebhodi yoku-ayina ukuze kusetyenziswe iindwendwe.
Izinto ezisisiseko ezibalulekileyo zibalulekile, kodwa izibonelelo ezongezelelweyo kwisakhiwo ziyamangalisa. Iindwendwe zifikelela ngokupheleleyo kuzo zonke izinto eziluncedo zesakhiwo kubandakanya ijim egcwele ngokupheleleyo kunye nequla elitofotofo elingapheliyo, kunye nendawo entle yokuphumla eluphahleni.
Isakhiwo sifikeleleka ngokukhubazeka kunye ne-elevator efikelela kuyo yonke imigangatho. Indawo yokupaka iya kufumaneka kuphela kwiindwendwe ezihlala iintsuku ezingama-30 okanye ngaphezulu kwaye indawo yokupaka yasesitalatweni iyafumaneka kufutshane.
Indawo yethu entle ibekwe kufutshane neBearing BTS Station (imizuzu emi-6 uhamba nge-500m umgama).
Yiya naphi na ngololiwe weBTS wesibhakabhaka ecaleni kweSukhumvit Line:
-Imizuzu eyi-15 ukuya eThonglor / Phrom Phong BTS (Emquartier)
-Imizuzu engama-20 ukuya kuNana / Asoke BTS (iterminal 21)
-Imizuzu engama-24 ukuya eChitlom BTS (CentralWorld, Big C)
-Imizuzu engama-26 ukuya eSiam BTS (Siam Paragon, Sian Centre, Siam Discovery, MBK mall)
-Imizuzu engama-40 ukuya eMochit BTS (imarike yempelaveki yaseChatuchak)
Ifanelekile kwisikhululo seenqwelomoya seBKK samazwe ngamazwe:
-Imizuzu engama-30 ukuya kwisikhululo seenqwelomoya saseBKK ngeTeksi okanye iGrab App
*Ukupaka iimoto kuya kufumaneka kuphela kwiindwendwe ezihlala iintsuku ezingama-30 okanye ngaphezulu.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Khet Bang Na